🥇 ▷ Wejiga 'ID ID' ayaa imanaya gacmo dheeri ah oo ID ID ah lama joojin doono, ayuu yidhi madaxa fulinta ee Apple ✅
Wejiga ‘ID ID’ ayaa imanaya gacmo dheeri ah oo ID ID ah lama joojin doono, ayuu yidhi madaxa fulinta ee Apple
Wareysi uu siiyay majaladda Daily Express ee ka soo baxda Ingiriiska, madaxweyne ku-xigeenka suuq-geynta wax soo saarka AppleGreg Joswiak wuxuu sheegay in shirkadda Cupertino ay wali ka shaqeyneyso sameynta ID ID, oo ah nidaamka aqoonsiga 3D ee horumarsan, oo ay heli karaan aalado badan oo shirkadda ah, laakiin taasi maahan sababtu ID taabashada, habka aqoonsiga faraha, waa la dejin doonaa.
“Waan hubnaa inaan sii wadno [Face ID] aalado dheeri ah, laakiin ID ID sidoo kale wuu sii wadayaa in la isticmaalo. Waa tikniyoolajiyad weyn oo ku jirta khadkayaga ipadka annaguna arki mayno markay soo baxdo goor dhow. “
Joswiak wuxuu kaloo sheegaa inta lagu gudajiro wareysiga in ID ID uu ahaa nidaamka noolaha koowaad ee Apple iyo macaamiisha shirkada jecel jiritaanka astaamaha, taas oo u oggolaanaysa wararka inay badalaan sida dadku u ilaashadaan aaladooda moobiilka.
“Laakiin waxaan rabnaa inaan kor u qaadno amniga noolaha dabiiciga ah iyada oo la kordhinayo nabadgelyada iyo ku habboonaanta adeegsiga, waana sababtaas tan keentay in loo yaqaan” ID ID “, ayuu raaciyay. “Waxaan bilownay ID ID laba sano ka hor annaga oo isticmaalaya iPhone X waxaanan u maleynay inay xitaa ka sii dabiiciga badan tahy” ID ID, adoo ku furaya aaladdaaga hal muuqaal. “
Markii wax laga weydiiyay tartan, Joswiak wuxuu sheegay in tartamayaasha “ay u maleynayaan inay abuuri karaan wax la mid ah kamarad kali ah taasina waa inta badan waxa ay rabaan inay sameeyaan. Nasiib darrose, waxaa jira sabab ay tani qaali u tahay; sabab jirta ayaa jirta [the iPhone] Waxay leedahay dhamaan qaybahaas, maxaa yeelay nabadgelyadu waa mid joogto ah halkii ay ka ahaan lahayd sawir 3D fudud. “
Madaxa fulinta wuxuu sidoo kale u arkaa inay muhiim tahay in shirkado kale ay raadinayaan waxyaabo kale oo ay ku soo bandhigaan xalalka aqoonsi ee wajiga ah: “Waxaan amaanayaa dadka iskudaya waxyaabo cusub, tartanku waa waxa adduunka ka dhigaya qof walbana ka fiican, laakiin taasi waa [the end of the notch in smartphones Apple] waa wax aannan fileynin inay dhaqso u soo dhowaadaan. “
Joswiak wuxuu kaloo sii sheegay in Face ID la rajeynayo inuu si dhakhso leh 30% noqdo dhaqso leh marka la sii daayo aaladda cusub ee iOS 13, oo si rasmi ah loo sii deyn doono iyada oo lala barbar dhigayo iPhone 11-ka berri, 10-ka Sebtember. Dhanka kale, xanta ayaa soo jeedineysa in Apple laga yaabo inuu diyaarinayo aaladda loo yaqaan “ID ID iPhone” ee shaashadda laga dhex arko 2020-ka.